App Outlet: magazay manerantany ho an'ny fampiharana GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
App Outlet: magazay manerantany ho an'ny fampiharana GNU / Linux
Outlet App dia fampiharana mahaliana izay mamela antsika hifantoka amin'ny tontolo iainana Fivarotana an-tserasera fampiharana samihafa sy mahasoa ho an'ny anay Rafitra miasa malalaka sy malalaka, miorina amin'ny endrika fonosana vaovao sy samihafa (Flatpak, Snap ary Appimage) misy.
Araka izany, Outlet App Hatramin'ny namoronana azy dia natao ho fivarotana fangatahana aingam-panahy avy amin'ny serivisy taloha an-tserasera amin'ny Linux App Store (https://linuxappstore.io/) tsy miasa intsony izany. Ho fanampin'izany, ny interface tsotra sy sariaka dia mamela anao hikaroka, hisintona ary hametraka fampiharana mora foana amin'ny ankamaroan'ny fizarana GNU / Linux.
Outlet App dia fampiharana tsara izay mamela antsika dieny izao, hialana amin'ny fitsidihana sy / na fampiasana Internet Stores an'ny fampiharana an-tserasera, toy ny:
Ary ny hafa fantatra, mitovy be amin'ny:
Izany dia miasa amin'ny alàlan'ny fametrahana ny rindranasa tsirairay na add-on amin'ny alàlan'ny fampiharana OCS-Url. Aorian'izay dia hiresaka momba ireo magazay hafa ireo izahay ary nilaza fa fampiharana OCS-Url.
1 App Outlet: magazay manerantany ho an'ny fampiharana
1.1 marary mitsika
App Outlet: magazay manerantany ho an'ny fampiharana
To download Outlet App tsy maintsy mandeha any aminy isika tranokala ofisialy ary ampidino amin'ny endrika tiany na ilaintsika. Amin'izao fotoana izao dia misy amin'ny endrika fametrahana:
.fandraisana (68.2 MB)
.snap (Tsy misy)
Ho an'ny fandinihana ataontsika dia hampidininay ny fonosana ao amin'ny format .deb ho an'ny fametrahana amin'ny alàlan'ny terminal.
Vantany vao alaina ao anaty ny ilay fonosana format .deb manohy mametraka azy amin'ny alàlan'ny terminal izahay amin'ny alàlan'ny baiko "dpkg", toy izao manaraka izao:
Raha vao apetraka dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana noforonina tao amin'ny sokajy sokajy «Accessories». Na avy amin'ny terminal amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny baiko "app-outlet". Raha tsy novonoina tamin'ny fomba voalohany izy dia azo atao amin'ny fomba faharoa hahitana ny karazana lesoka asehon'ny terminal antsika.
Eny amin'ny alàlan'ny fandefasana ity baiko manaraka ity:
Ny hafatra diso dia miseho:
Andramo mihazakazaka ireto baiko manaraka ireto:
Ary avereno averina ny baiko avy hatrany:
Raha toa ka novonoina tsara avy tao amin'ny terminal, dia hovitaina tsara ihany koa avy amin'ny menio. Tsipika baiko sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone=1 dia tsy maintsy vonoina alohan'ny hampiharana azy, raha tsy voalamina ao a script na asa voalahatra amin'ny voalohany (fanombohana) an'ny Operating System.
Vantany vao novonoina ary natomboka tsy nisy olana Outlet App mampiseho amintsika varavarankely misy ireto singa manaraka ireto:
Bara fikarohana: Mba hahitana ireo fisoratana anarana voasoratra anarana amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny lamina fikarohana miaraka amin'ny anarany na ny famaritana azy.
Menu: Izy io dia manana safidy 4 dia ny trano, sokajy, fanamafisana ary ampidirina ao.
Takelaka fampiharana: Izay mampiseho andalana 3 antsoina hoe Fampiharana malaza (Fampiharana malaza), Nohavaozina vao haingana (Vao nohavaozina) ary Famoahana vaovao (Famoahana vaovao).
Raha fintinina, amin'ny Outlet App manolotra anay rindranasa feno ahafahana mahalala, mametraka ary manandrana.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ity fampiharana mahaliana antsoina hoe ity «App Outlet», izay ahafahantsika mifantoka amin'ny tontolo iainana Fivarotana an-tserasera fampiharana samihafa sy mahasoa ho an'ny anay «Sistemas Operativos Libres y Abiertos» mifototra amin'ny endrika fonosana vaovao sy samihafa (Flatpak, Snap ary Appimage) misy; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » App Outlet: magazay manerantany ho an'ny fampiharana GNU / Linux
Salama, nahagaga fa vao haingana aho no nanandrana nanandrana fampiharana iray tamim-pahatsorana
ary nahazo lesoka sahala amin'ilay nolazainao aho ary tamin'ny farany nanohy ny fitsapana azy aho, tsy nanomboka nanadihady ny fomba hamahana izany olana izany koa aho.
Inona no vokatr'io lesoka io? Hitako fa manjavozavo ny manao an'izany mba hampandeha ilay fampiharana. Tsy azo vahana amin'ny fomba hafa?
Miarahaba an'i Jony127! Miezaha hihazakazaka ity na fampiharana hafa "/ opt / App Outlet / app-outlet" –tsy-boaty sand%% U amin'ny hitsin-dalana na terminal toy izao. Ny safidy –no-boaty boaty dia manalavitra ny fampandehanana voalohany ny baiko sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone = 1
Eny, amin'ity safidy ity dia azoko atao ny manatanteraka azy nefa tsy mila mampiasa ny iray amin'ireo baiko teo aloha, ny fanontaniako dia, azoko atao ve ny manimba ny filan'ny rafitra? Azoko fa miaraka amin'io baiko io dia mandeha ny fampiharana nefa tsy mampiasa fiarovana boaty sandbox.
Mazava ho azy fa raha mihazakazaka azy ivelan'ny Sandbox ianao dia mety hiharan'ny fanafihana iray, na dia heveriko fa ho an'ny mpampiasa mahazatra ary indrindra ho an'ny mpampiasa GNU / Linux, dia mety kely dia kely izany, na dia azo atao aza. Ho an'ny ambiny, mbola hanohy ny famotopotorana ny antony sy ny vahaolana aho.
Miarahaba an'i Jony127! Raha milaza ny lesoka voavaha amin'ity baiko ity ianao:
Rehefa avy nanadihady marina izay manitsy na ny fomba fanaoko azy aho, ny marina dia tsy afaka nahita ilay voalohany aho ary tsy nisy nilana azy daholo ny zavatra rehetra notadiaviko ho an'ilay faharoa. Na izany na tsy izany, antenaina fa hisy mpamaky hafa hanome antsika jiro amin'ity.
Initiative noforonina mba hampitambatra ny asa eo amin'ny openSUSE Leap sy ny SUSE Linux Enterprise
Ny Zoom dia notangain'ny iray amin'ireo tompon-tany aminy noho ny olana sedrain'izy ireo ankehitriny